MOdx Useful Snippets - MYSTERY ZILLION
MOdx Useful Snippets
November 2009 edited December 2009 in CMS
MOdx မှာ . စပြီး install လုပ်ကတည်းကပါတဲ့ snippets တွေအများကြီးပါပဲ အဲဒီထဲက အသုံး၀င်တာလေးတစ်ခုကို စပြီး ပြောပြပါ့မယ် ဒီ thread က Modx ကို သုံး တတ်စသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် အစကနေသိချင်တဲ့ သူတွေကတော့ Modx cms ဆိုတဲ့ thread အောက်မှာမေးနိုင်ပါတယ် သိသလောက်ပြောပြပါ့မယ်
ဟုတ်ပြီ ခုနက ဟာကိုဆက်ရရင် modx ရဲ့ eform ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် အီးမေးလ်ကအစ မိုဘိုင်းဖုန်း အထိ ကိုယ့် web page ကနေ လှမ်းပြီး message, enquriry, enroll, reservation စတာတွေလုပ်လို့ရတဲ့ snippets တစ်ခုပါ ....
wayfinder ဆိုတာ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ snippet လေးတစ်ခုပါ
ဥပမာ ဗျာ သာမန် ကျွန်တော်တို့ ရေးတဲ့ code က
<li class="active"><a href="home.html">Home</li>
<li <a href="service.html">Service</li>
<li <a href="product.html">Product</li>
<li <a href="profile.html">Profile</li>
အဲဒါကို modx ထဲပြောင်းထည့်တဲ့ အခါ ကျတော့ menu တွေကို နာမည်အသေသွားရေးလို့မရတော့ဘူး ဒါမျုုိးက joomla wordpress drupal မှာဆို လွယ်လွယ်လေးပါ ဘာမှမလိုဘူး backend မှာ menu ပြောင်းတဲ့ field နေရာတွေမှာ ပြောင်းရင် frontend မှာ သူ css ရေးထားတဲ့ အတိုင်းပေါ်တာပါပဲ ဒါပေမယ့် modx မှာ ကျတော့ အဲဒီလိုပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ခက်ပါတယ် ကျွန်တော်မသိတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ ကျွန်တော်အခုသုံးတာကတော့ အဲဒီ wayfinde snippet ပါပဲ .. ဟုတ်ပြီ ဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာ ပြောပြပါ့မယ် လက်ရှိ modx 1.0.0 ရော modx 1.0.2 မှာပါ wayfinder ပါပြီးသားပါ ..
အဲဒီလိုရေးလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆိုက်မှာ ၇ှိသမျှ page တွေရဲ့ menu title မှာ ဖြည့်ထားသမျှဟာတွေ အားလုံးကို wayfinder က ဖော်ပြပေးပါတယ် page ၇ှိသလောက်ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် အသေဖြစ်မနေတော့ပါဘူး .. www.4igloo.com မှာ ကျွန်တော် wordpress template ကို modx နဲ့ ပြောင်းရေးထားတာ ရှိပါတယ် . wayfinder သုံးထားတာကို ကြည့်လို့ရပါတယ်